Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: 2020
မဟာဘုတ် ဗေဒင် အဟော
#မဟာဘုတ်ဗေဒင်လေး သိချင် ချက်ချင်းမေး အီးမေးနဲ့ ပို့ပေးမည်၊ အောက်ပါလင့်မှာ ဝင်မေးကြည့်ပေးပါလား? ချက်ချင်းမေး ချက်ချင်းဖြေ တစ်နေ့ အယောက် တစ်ရာသာ
သူများတွေကတော့ #မမဝဝထထက ။ ကိုယ်ကတော့ #ဘဘညညထထကုတ်။ (ဝဲ မဟုတ် Coding ကို ပြောတာပါ။ အသက်သိပ်မကြီးသေးပေမည့် ဘဘ ခေါ်တဲ့ သူတွေ ရှိတယ် တူလေးတွေ )
ခုတလော #Excel ဖိုင် ဖော်မြူလာရှုပ်ရှုပ်တွေ အဖြေတွက်ထုတ်တာ လေ့လာရင်း အိုင်ဒီယာတစ်ခု ပေါ်လာတယ်။ ဆိုပါစို့ တစ်ယောက်ယောက်က သိလို၍ လှမ်းမေးတဲ့ မေးခွန်းအပေါ် အဖြေကို အော်တို တွက်ထုတ်ပြီး အော်တို ရီပလိုင်း ပြန်လို့ ရတဲ့ နည်းလမ်း ရှိနိုင်မလား? နောက်ပြီး စရိတ် အကုန်အကျလည်း သက်သာရမည်။ Google ခေါက်ပြီး နှစ်ညလောက် ကလိလိုက်တာ နောက်ဆုံး စိတ်ချမ်းသာစရာ အဖြေတစ်ခု ရှာတွေ့သွားခဲ့တယ်။
ယူဇာတစ်ဦးမေးလာတဲ့ မေးခွန်းကို Google Forms နဲ့ လက်ခံလိုက်မယ်။ ရတဲ့ information တွေကို Excel Spreadsheet ပေါ် တင်ခိုင်းလိုက်မယ်။ တင်လာတဲ့ data အချက်အလက်တွေ သုံးပြီး အဖြေကို တွက်ထုတ်လိုက်မည်။ ရတဲ့ အဖြေကို သူဖြည့်ထားတဲ့ အီးမေးကို ပြန်ပို့လိုက်မည်။ အားလုံး အော်တိုမက်တစ် ဆိုလိုတာက လူဝင်စွက်စရာမလို။
Scenario အသုံးခံအဖြစ် ဘာကို လုပ်မလဲ စဥ်းစားကြည့်တော့ မဟာဘုတ်ဗေဒင်ကလေး အွန်လိုင်းတင်ထားတာ သွားတွေ့တယ်။ အဲ့ဖိုင်လေးကို အခြေခံတွက်ချက်ပြီး Scenario တစ်ခု တည်ဆောက် စမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ပေးချက်က လူအမည်နဲ့ မွေးနေ့။ ပေးရန်က
(၁) မဟာဘုတ် ဘာအဖွားလဲ?
(၃) မဟာဘုတ် ဟောစာတမ်းက ဘာလဲ?
အခမဲ့ ဖရီးဆိုတော့ တစ်နေ့ လူအယောက်(၁၀၀)စာပဲ မေးခွင့် ရှိတယ်။ ဒီထက်ပိုရင် စက်ရုပ်က မဖြေတော့ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်သွားလို့ ရတဲ့ ပီတိလေးနဲ့ သဘောတွေကျ။ Payment module တော့ မပါနိုင်ပေမည့် ကလောက်ဆို ဘာလိုသေးလဲပေါ့ ...။
ခက်တဲ့အပိုင်းက တကယ်တမ်းဆို Calculation process မျှသာ...
Posted by Ko Gyii at 1:28 AM No comments :
Links to this post Labels: mahabote , မဟာဘုတ်